Iimpazamo zoNgezelelweyo zeeKholeji zeeKholeji
Iimpazamo eziqhelekileyo zoNgezelelweyo
Ukuba iKholeji idinga i-Essential Essay, Gwema ezi mpazamo eziqhelekileyo
Iingqinisiso ezongezelelweyo zezicelo zeekholeji zithatha zonke iintlobo zeefom, kodwa uninzi lwazo zibuza umbuzo ofanayo: "Kutheni ufuna ukuya kwikholeji?"
Umbuzo uzwakala ulula, kodwa iikholeji zokungeniswa kwamakholeji zibona iimpazamo ezintlanu ngaphantsi rhoqo. Njengoko ubhala isicatshulwa sakho esongezelelweyo kwiikholeji zakho, qi
I-Essay Yesizukulwana kwaye ayikho Inkcukacha
Iimpazamo zesicatshulwa esongezelelweyo. UBetsie Van der Meer / Getty Izithombe
Ukuba ikholeji ikubuza ukuba kutheni ufuna ukuya khona, yiba yinto ecacileyo. Imincoko emininzi kakhulu efana nale Nzululwazi yesampula yeYunivesithi yaseDuke - incoko ayitshiyo into ecacileyo malunga nesikolo esikulo mbuzo. Naluphi na isikolo osenza isicelo sakho, qiniseka ukuba isicatshulwa sakho sichaza iinkalo ezithile zesikolo ezibhenela kuwe.
Inqaku lide kakhulu
Uninzi olusenza ukuba isicatshulwa esongezelelweyo sibuze ukuba ubhale umhlathi omnye okanye ezimbini. Musa ukuya ngaphaya komda ochaziweyo. Kwakhona, qaphela ukuba umhlathi onzima kunye obandakanyekayo ungcono kunemihlathi emibini. Amagosa avumelekileyo anamawaka eemfuno zokufunda, kwaye baya kuqonda ukuphuza.
I-Essay Ayiphenduli Umbuzo
Ukuba i-essay prompt ikucela ukuba uchaze ukuba kutheni ukuba ikholeji ibingumdlalo ofanelekileyo kumdla wakho, ungabhali isicatshulwa ngendlela abahlobo bakho nabazalwana bakho baya ngayo esikolweni. Ukuba i-prompt ikubuza ukuba unethemba lokukhula njani kwiikholejini, ungabhali isicatshulwa malunga nokuba uninzi kangakanani ufuna ukufumana i-degree-bachelor degree. Funda ngokuphindaphindiweyo amaxesha amaninzi ngaphambi kokubhala, kwaye uyifunde kwakhona emva kokubhala isicatshulwa sakho.
Unomsindo njengeNyoka ebalulekileyo
"Ndifuna ukuya kuWilliam ngenxa yokuba ubawo kunye nomntakwethu bobabini baya kuWilliam ..." Isizathu esihle sokuya kwiikholeji kuba ikharityhulam iyafana neenjongo zakho zemfundo kunye nezobugcisa. Iimvavanyo ezijolise kumgangatho welifa okanye ukudibana nabantu abaneempembelelo bahlala behluleka ukuphendula umbuzo kakuhle, kwaye banokuthi bavelise ingcamango engalunganga.
Abacebisi abaxhamliweyo bayabona ezininzi iincwadana ezithembekileyo kwiingxaki. Ngokuqinisekileyo, uninzi lwethu siye ekholeji kuba sifuna ukufumana idigri kwaye sifumane umvuzo omhle. Ungagxininiseli eli nqaku kwisicatshulwa sakho. Ukuba isicatshulwa sakho sithi ufuna ukuya ePenn ngenxa yokuba i-majors yabo yebhizinisi ifumana imali engaphezulu kunezo ezivela kwezinye iikholeji, awuyi kuba mnandi. Uya kuzwakalisa ukuzinqwenela nokuthanda izinto eziphathekayo.
Isampula sokwamkelwa kwekholeji yeSampula - iBhodi yeLutsha yase-Allegany
Ikhompyutheni yesicelo seKholeji - uYobhi kufuneka ndiyeke
Indlela yokubhala i-Great College Application Essay Title
Indlela yokubhala i-Essential Exit Application Essay
I-Essay Application Common, Ikhetho 1: Yabelana ngeNdaba yakho
Umzekelo wesisicelo se-Application - i-Porkopolis
IJapan kubahambi: Ukuhamba
I-Pros and Consence of Use of Scale Grading Scale
Ziziphi Zonke Amagama KaGanesha?
Indlela i-Guardian Angels ikunceda ngayo ngelixa ulala
Oko okubhaliweyo kwiMboniselo yePeriodic Mean
Iyini Inyangeni Yenyanga?
Yiyiphi ImiSebenzi Emibini YezoPhando Esixelela NgoKhetho LweSikolo
Kutheni Kuthiwa Utywala Kukukwenza U-Pee?
Qaphela kwakhona ukutshala i-Pin Oak kwiYard yakho
Indlela Inyosi Yobusi Ithetha ngayo
Imifanekiso ka-Albert Einstein
Jonga iZakhono zoLuntu ngeeFree Worksheets ze-Kids
Indlela uJohn Lewis ebizwa ngayo ngo-March Trilogy ingafundisa abafundi ngabaLuntu
Ukunikezelwa kweeMerika zokuHlanganisa Isibonelo Isixazululo
Yintoni Enokwenza Umtshato WamaKatolika Uvumeleke?
IziCwangciso Zezobubele ezivela kwiiLD Leaders